ပြျောစရာကောငျးတဲ့အရာတှကေို အလုပျမှာ အမြားဆုံးကွုံတှရေ့နိုငျသလို စိတျညဈစရာတှကေိုလညျး အလုပျမှာပဲ အမြားဆုံးကွုံတှရေ့နိုငျပါတယျ။ ဘာလို့လညျးဆိုရငျ အလုပျဟာ ကနြျောတို့လူ့သကျတမျးရဲ့ ၃ပုံ၂ပုံခနျ့ကို သုံးစှဲဖွတျသနျးကွရလို့ပါ။ အလုပျမလုပျပဲ လူ့ဘဝကိုဖွတျသနျးနိုငျတဲ့လူဆိုတာ တဈသိနျးမှာတဈယောကျလောကျပဲရှိခငျြရှိမှာပေါ့။ ရှိခဲ့ရငျတောငျ အဲ့လူဘဝဟာ ပငျြးစရာသိပျကောငျး သှားပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ လူတိုငျးဟာ အလုပျကို သမီးရညျးစားကိုခဈြခငျသလို မွတျမွတျနိုးနိုး လုပျကိုငျကွဖို့လိုပါတယျ။
အလုပျမှာ မိတျဆှကေောငျးတှရေနိုငျသလို သူ့ထကျသာမနာလိုတှလေညျး ကွုံတှရေနိုငျပါတယျ။ ရှမှေ့ာတော့ ကောငျးပွီကောငျးရဲ့နဲ့ နောကျကှယျကတြော့မှ သူကတော့ဘယျလိုရီရတာဆိုပွီး ထိုငျဟားနရေငျ သပွေီပေါ့နော။ သညျလိုသူတှအေကွောငျးကို ကိုယျကပွနျကွား ပွနျသိနတေဲ့အခါ အပွုံးမပကျြဆကျဆံပေးတတျဖို့လိုပါတယျ။ ဒါမှ အတငျးနဲ့အဖငျြးဟာ သူ့အလိုလိုပြောကျကှယျသှားမှာပါ။ ပွီးတော့ သညျလိုတိုးတိုးတဈမြိုး ကယျြကယျြတဈမြိုးတှကေိုလညျး သိပျအရေးမလုပျ အာရုံမစိုကျမိဖို့ သတိပွုသငျ့ပါတယျ။ ရုံးတှငျးအတိုကျအခိုကျတှကေို အာရုံစိုကျအလေးထားမိတဲ့အခါ ကိုယျလုပျရမယျ့အလုပျတှမေပွီးပွတျတဲ့အပွငျ နစေ့ဉျလူနမှေုဘဝကိုပါ ထိခိုကျလာတာမြိုးတှထေိ ဆိုးဆိုးရှားရှားဖွဈပျေါလာနိုငျပါတယျ။
သူမြားပွောတိုငျး ခေါငျးငုံ့ငွိမျနရေမယျလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ တဈခြို့အကွောငျးအရာတှကေ ကိုယျ့ရဲ့ ရပျတညျမှုကို ထိခိုကျလာနိုငျတာမြိုးဆိုရငျတော့ ပွနျလညျဖွရှေငျးပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဖွရှေငျးတဲ့နရောမှာလညျး အရမျးကွီး ရှငျးပွနတောမြိုးမဖွဈစပေဲ မသိနားမလညျသေးတဲ့ အရှယျမရောကျသေးတဲ့ ကလေးငယျလေးတဈယောကျကို လူကွီးတဈယောကျက သနားကွငျနာတဲ့ပုံစံမြိုးနဲ့ စိတျရှညျလကျရှညျပွနျလညျဖွရှေငျးပေးရမွှာဖဈပါတယျ။ သညျဖွရှေငျးနညျးက သငျ့ကိုပိုပွီး Professional ဆနျစနေိုငျပွီး Office attack လုပျတတျသူတှကေိုတော့ နရောတဈကာပွဿနာရှာသူတှအေဖွဈ တှမွေ့ငျသှားစနေိုငျပါတယျ။
ပွဿနာတဈခု အကွောငျးကိစ်စတဈခုကို ရငျဆိုငျဖွရှေငျးရာမှာ ဒေါသရှမေ့ထားမိဖို့ အထူးလိုအပျပါတယျ။ ဖွဈသမြှကို ခေါငျးအေးထားပွီး ကိုယျ့အကွောငျးမကောငျးပွောသူတှေ သူဌေးကိုဖားပွီး မကျြနှာလုပျတတျသူတှကေို ရငျဆိုငျဖွရှေငျးရမှာပါ။ သညျလိုမှမဟုတျပဲ ရှူးရှူးဒိုငျးဒိုငျးနဲ့ မငျးဘာလဲ ? ငါဘာလဲ? ဆိုတာမြိုးတှသှေားလုပျလိုကျရငျ သငျမှနျနခေဲ့ရငျတောငျ ကွကျခွခေတျနဲ့ သုညတဈလုံးပဲ ပိုငျဆိုငျရဖို့ရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Office Attack ဖနျတီးတတျသူတှကေို ဒေါသရှမေ့ထားပဲ စနဈတကရြငျဆိုငျတတျအောငျ ကွိုးစားပါ။ ဘယျသူကတော့ ကိုယျ့ကိုကောငျးတယျ။ ဘယျသူကတော့ကိုယျ့ပျေါ မနာလိုဖွဈနတေယျဆိုတာမြိုးတှေ သငျက ကွိုတငျခနျ့မှနျးထားနိုငျရငျ ကိုယျ့ JD ကို အေးဆေးသကျသာလုပျနရေုံပါပဲ။
တဈခြို့နရောတှေ ရုံးတှေ အိမျတှေ လမျးတှမှော ရှိပါတယျ။ ကပျပါးကောငျတို့ ခှခှေကေောငျတို့တှေ။ သူတို့က လူအနားကိုကပျပွီး လဈရငျကိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လူတှကေကွညျ့လိုကျရငျတော့ သူမလုပျတတျသလို သူမဟုတျသလိုအထာနဲ့ ခှခှေလေေးငွိမျလို့။ သညျလိုကပျပါးကောငျ ခှခှေကေောငျတှလေို ရှံ့စရာကောငျးတဲ့ လူ့ကပျပါး လူ့ခှခှေကေောငျတှကေ သူဌေးတို့ မနျနဂြောတို့အနားမှာ သငျ့အကွောငျးတှေ ပွနျလညျဖောကျသညျခလြိုကျတဲ့အခါမြိုးမှာ သငျက အကြိုးသငျ့အကွောငျးသငျ့ ပွနျလညျဖွရှေငျးပွတတျဖို့ လိုပါတယျ။ ပွနျဖွရှေငျးရာမှာ ကိုယျကမှနျနဖေို့လညျး လိုတာပေါ့။ ဒါဆို Office Attack ပဲလုပျတတျတဲ့ ကပျပါးကောငျ ခှခှေကေောငျတှအေနနေဲ့ သူ့နရောသူပွနျခှနေရေုံကလှဲရငျ ဘာမှမလုပျတတျတော့ပါဘူး။
တဈခြို့အရာတှကေို လဈြလြူရှုထားလိုကျတာအကောငျးဆုံးပါ။ ကိုယျက တဈခုခုထူးခြှနျလို့ သူဌေးက ရာထူးတိုးပေးလိုကျတာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့အထကျအရာရှိက ခြီးကြုးလိုကျတာပဲဖွဈဖွဈ သငျက အလှနျအမငျးဝမျးသာဂုဏျယူလိုကျတာမြိုးတှေ မလုပျမိဖို့လိုပါတယျ။ သညျလိုမှမဟုတျပဲ သူဌေးကတော့ ငါ့ကိုဘယျလိုတျောလို့ သညျနရောကိုပေးလိုကျတာတို့၊ ဂြာကွီးကတော့ ငါ့ကို ဘယျလိုတှခြေီးကြုးတာပေါ့ဆိုရငျတော့ သငျ့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှရေဲ့ မကျြစောငျးအမြိုးမြိုးကို ပိုငျဆိုငျရဖို့သခြောပါပွီ။ ပိုပွီးသခြောတာက Office Attack လုပျဖို့ခြောငျးနတေဲ့သူတှပေါ အခှငျ့အရေးကောငျးတှေ ရရှိသှားနိုငျလို့ သတိထားသငျ့ပါတယျ။
ငွီးငွူတာဟာ ဘယျနရောမှ မကောငျးပါဘူး။ အလုပျထဲမှာ အိမျမှာ ပတျဝနျးကငျြမှာ စသညျဖွငျ့ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးထဲမှာ ကိုယျကသာ ငွီးငွူခငျြ ငွီးငွူကွမယျ အခွားသူတဈယောကျယောကျက ပငျပနျးလိုကျတာတို့ ငါ့ကမြှကံဆိုးလိုကျတာတို့ ငွီးငွူမိရငျ အလိုလိုလူဖငျြးလူညံ့စာရငျးဝငျကာ နှာခေါငျးရှုံ့သှားတတျကွပါတယျ။ သညျလို လူ့သဘော လူ့မနောကိုနားမလညျပဲ ‘’အလုပျတှဆေိုတာ တောငျလိုပုံနတောပဲ၊ သညျနလေ့ညျးအလုပျတှရှေုပျပွနျပွီ၊ ငါလုပျလို့ပွီး ပွီးပါ့မလား၊ ငါ့ကမြှ အလုပျတှမြေားလိုကျတာ၊ စသညျဖွငျ့ ငွီးငွူမိတာမြိုးတှကေ သငျ့ကို Smart မဖွဈစပေါဘူး။ ဒါ့အပွငျ Office Attack လုပျဖို့ခြောငျးနတေဲ့သူတှအေတှကျပါ သဘောကစြရာကွီးဖွဈသှားနိုငျပွီး နောကျနေ့ သူဌေးရုံးခနျးထဲမှာ ဘာလို့ငွီးငွုနတောလဲ? ဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျကွီးနဲ့ ဖွရှေငျးနရေပါလိမျ့မယျ။
အလုပျဆိုတာ လူမြိုးပေါငျးစုံ၊ အမူအကငျြ့ပေါငျးစုံတို့ စုစညျးရာဖွဈလို့ လူတဈကိုယျ မူတဈမြိုးတှေ ရှိနိုငျပါတယျ။ အခွားလုပျဖျောကိုငျဖကျတှရေဲ့ အမူအကငျြ့နဲ့ အလအေ့ထတှကေို စူးစမျးပွီး လကျခံပေးနိုငျအောငျကွိုးစားပါ။ ရုံးကအကုနျအကခြံကြှေးမှေးတဲ့ Party ပှဲတှမှော အခွားသူတှကေ ဟော့ပေါ့ဖွဈနရေငျ သငျက မာလာရှမျးကောလုပျနလေို့မရပါဘူး။ သငျလညျးပဲ ဟော့ပေါ့မကွိုကျပမေယျ့ အားလုံးရဲ့စိတျဆန်ဒကို အလေးထားတဲ့သူအဖွဈ အခွားလုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေ မွငျလာအောငျဖနျတီးသငျ့ပါတယျ။ ဒါဆို တဈခြိနျခြိနျမှာ ရငျဆိုငျကွုံတှရေ့နိုငျတဲ့ Office Attack ခံရနိုငျမှုကနေ အလိုလိုကာကှယျပွီးသားဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
ဘယျအလုပျမဆို စိတျစတေနာအပွညျ့နဲ့ လုပျကိုငျနိုငျရငျ အောငျမွငျမှုရရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျကဘယျလောကျကွိုးစားကွိုးစား အခွားလုပျဖျောကိုငျဖကျတှရေဲ့ လြှပျတဈပွတျထိုးနှကျခကျြတှကေိုလညျး ရှောငျရှားတတျဖို့လိုအပျပါသေးတယျ။ လောကကွီးက တဈဖွောငျ့တညျးသှားလို့မရတာကွောငျ့ အခြိုးအကှနေ့ရောတှမှော ခွခြေျောမှောကျလကျြမလဲမိစဖေို့အတှကျ အထကျပါအခကျြလေးတှကေို အကွုံပွုဆှေးနှေးလိုကျရပါတယျ။
အားလုံးပဲ မိမိလြှောကျလှမျးရာ ဘဝမှတျတိုငျတှမှော အောငျလံလှငျ့ထူနိုငျကွပါစေ။
Office Attacker တွေကို ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်မလဲ
ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကို အလုပ်မှာ အများဆုံးကြုံတွေ့ရနိုင်သလို စိတ်ညစ်စရာတွေကိုလည်း အလုပ်မှာပဲ အများဆုံးကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုရင် အလုပ်ဟာ ကျနော်တို့လူ့သက်တမ်းရဲ့ ၃ပုံ၂ပုံခန့်ကို သုံးစွဲဖြတ်သန်းကြရလို့ပါ။ အလုပ်မလုပ်ပဲ လူ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့လူဆိုတာ တစ်သိန်းမှာတစ်ယောက်လောက်ပဲရှိချင်ရှိမှာပေါ့။ ရှိခဲ့ရင်တောင် အဲ့လူဘဝဟာ ပျင်းစရာသိပ်ကောင်း သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းဟာ အလုပ်ကို သမီးရည်းစားကိုချစ်ခင်သလို မြတ်မြတ်နိုးနိုး လုပ်ကိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်။
အလုပ်မှာ မိတ်ဆွေကောင်းတွေရနိုင်သလို သူ့ထက်သာမနာလိုတွေလည်း ကြုံတွေရနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့မှာတော့ ကောင်းပြီကောင်းရဲ့နဲ့ နောက်ကွယ်ကျတော့မှ သူကတော့ဘယ်လိုရီရတာဆိုပြီး ထိုင်ဟားနေရင် သေပြီပေါ့နော။ သည်လိုသူတွေအကြောင်းကို ကိုယ်ကပြန်ကြား ပြန်သိနေတဲ့အခါ အပြုံးမပျက်ဆက်ဆံပေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ အတင်းနဲ့အဖျင်းဟာ သူ့အလိုလိုပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ။ ပြီးတော့ သည်လိုတိုးတိုးတစ်မျိုး ကျယ်ကျယ်တစ်မျိုးတွေကိုလည်း သိပ်အရေးမလုပ် အာရုံမစိုက်မိဖို့ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ရုံးတွင်းအတိုက်အခိုက်တွေကို အာရုံစိုက်အလေးထားမိတဲ့အခါ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေမပြီးပြတ်တဲ့အပြင် နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကိုပါ ထိခိုက်လာတာမျိုးတွေထိ ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
သူများပြောတိုင်း ခေါင်းငုံ့ငြိမ်နေရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ တစ်ချို့အကြောင်းအရာတွေက ကိုယ့်ရဲ့ ရပ်တည်မှုကို ထိခိုက်လာနိုင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာလည်း အရမ်းကြီး ရှင်းပြနေတာမျိုးမဖြစ်စေပဲ မသိနားမလည်သေးတဲ့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ကို လူကြီးတစ်ယောက်က သနားကြင်နာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သည်ဖြေရှင်းနည်းက သင့်ကိုပိုပြီး Professional ဆန်စေနိုင်ပြီး Office attack လုပ်တတ်သူတွေကိုတော့ နေရာတစ်ကာပြဿနာရှာသူတွေအဖြစ် တွေ့မြင်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ပြဿနာတစ်ခု အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာမှာ ဒေါသရှေ့မထားမိဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ဖြစ်သမျှကို ခေါင်းအေးထားပြီး ကိုယ့်အကြောင်းမကောင်းပြောသူတွေ သူဌေးကိုဖားပြီး မျက်နှာလုပ်တတ်သူတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာပါ။ သည်လိုမှမဟုတ်ပဲ ရှူးရှူးဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ မင်းဘာလဲ ? ငါဘာလဲ? ဆိုတာမျိုးတွေသွားလုပ်လိုက်ရင် သင်မှန်နေခဲ့ရင်တောင် ကြက်ခြေခတ်နဲ့ သုညတစ်လုံးပဲ ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Office Attack ဖန်တီးတတ်သူတွေကို ဒေါသရှေ့မထားပဲ စနစ်တကျရင်ဆိုင်တတ်အောင် ကြိုးစားပါ။ ဘယ်သူကတော့ ကိုယ့်ကိုကောင်းတယ်။ ဘယ်သူကတော့ကိုယ့်ပေါ် မနာလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ သင်က ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားနိုင်ရင် ကိုယ့် JD ကို အေးဆေးသက်သာလုပ်နေရုံပါပဲ။
တစ်ချို့နေရာတွေ ရုံးတွေ အိမ်တွေ လမ်းတွေမှာ ရှိပါတယ်။ ကပ်ပါးကောင်တို့ ခွေခွေကောင်တို့တွေ။ သူတို့က လူအနားကိုကပ်ပြီး လစ်ရင်ကိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေကကြည့်လိုက်ရင်တော့ သူမလုပ်တတ်သလို သူမဟုတ်သလိုအထာနဲ့ ခွေခွေလေးငြိမ်လို့။ သည်လိုကပ်ပါးကောင် ခွေခွေကောင်တွေလို ရွံ့စရာကောင်းတဲ့ လူ့ကပ်ပါး လူ့ခွေခွေကောင်တွေက သူဌေးတို့ မန်နေဂျာတို့အနားမှာ သင့်အကြောင်းတွေ ပြန်လည်ဖောက်သည်ချလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ သင်က အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ပြန်လည်ဖြေရှင်းပြတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပြန်ဖြေရှင်းရာမှာ ကိုယ်ကမှန်နေဖို့လည်း လိုတာပေါ့။ ဒါဆို Office Attack ပဲလုပ်တတ်တဲ့ ကပ်ပါးကောင် ခွေခွေကောင်တွေအနေနဲ့ သူ့နေရာသူပြန်ခွေနေရုံကလွဲရင် ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ပါဘူး။
တစ်ချို့အရာတွေကို လျစ်လျူရှုထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ။ ကိုယ်က တစ်ခုခုထူးချွန်လို့ သူဌေးက ရာထူးတိုးပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အထက်အရာရှိက ချီးကျုးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်က အလွန်အမင်းဝမ်းသာဂုဏ်ယူလိုက်တာမျိုးတွေ မလုပ်မိဖို့လိုပါတယ်။ သည်လိုမှမဟုတ်ပဲ သူဌေးကတော့ ငါ့ကိုဘယ်လိုတော်လို့ သည်နေရာကိုပေးလိုက်တာတို့၊ ဂျာကြီးကတော့ ငါ့ကို ဘယ်လိုတွေချီးကျုးတာပေါ့ဆိုရင်တော့ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ မျက်စောင်းအမျိုးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ရဖို့သေချာပါပြီ။ ပိုပြီးသေချာတာက Office Attack လုပ်ဖို့ချောင်းနေတဲ့သူတွေပါ အခွင့်အရေးကောင်းတွေ ရရှိသွားနိုင်လို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
ငြီးငြူတာဟာ ဘယ်နေရာမှ မကောင်းပါဘူး။ အလုပ်ထဲမှာ အိမ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စသည်ဖြင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ကိုယ်ကသာ ငြီးငြူချင် ငြီးငြူကြမယ် အခြားသူတစ်ယောက်ယောက်က ပင်ပန်းလိုက်တာတို့ ငါ့ကျမှကံဆိုးလိုက်တာတို့ ငြီးငြူမိရင် အလိုလိုလူဖျင်းလူညံ့စာရင်းဝင်ကာ နှာခေါင်းရှုံ့သွားတတ်ကြပါတယ်။ သည်လို လူ့သဘော လူ့မနောကိုနားမလည်ပဲ ‘’အလုပ်တွေဆိုတာ တောင်လိုပုံနေတာပဲ၊ သည်နေ့လည်းအလုပ်တွေရှုပ်ပြန်ပြီ၊ ငါလုပ်လို့ပြီး ပြီးပါ့မလား၊ ငါ့ကျမှ အလုပ်တွေများလိုက်တာ၊ စသည်ဖြင့် ငြီးငြူမိတာမျိုးတွေက သင့်ကို Smart မဖြစ်စေပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Office Attack လုပ်ဖို့ချောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ပါ သဘောကျစရာကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပြီး နောက်နေ့ သူဌေးရုံးခန်းထဲမှာ ဘာလို့ငြီးငြုနေတာလဲ? ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့ ဖြေရှင်းနေရပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်ဆိုတာ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ အမူအကျင့်ပေါင်းစုံတို့ စုစည်းရာဖြစ်လို့ လူတစ်ကိုယ် မူတစ်မျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ အမူအကျင့်နဲ့ အလေ့အထတွေကို စူးစမ်းပြီး လက်ခံပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ရုံးကအကုန်အကျခံကျွေးမွေးတဲ့ Party ပွဲတွေမှာ အခြားသူတွေက ဟော့ပေါ့ဖြစ်နေရင် သင်က မာလာရှမ်းကောလုပ်နေလို့မရပါဘူး။ သင်လည်းပဲ ဟော့ပေါ့မကြိုက်ပေမယ့် အားလုံးရဲ့စိတ်ဆန္ဒကို အလေးထားတဲ့သူအဖြစ် အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက မြင်လာအောင်ဖန်တီးသင့်ပါတယ်။ ဒါဆို တစ်ချိန်ချိန်မှာ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ Office Attack ခံရနိုင်မှုကနေ အလိုလိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်အလုပ်မဆို စိတ်စေတနာအပြည့်နဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်ရင် အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစား အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ လျှပ်တစ်ပြတ်ထိုးနှက်ချက်တွေကိုလည်း ရှောင်ရှားတတ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။ လောကကြီးက တစ်ဖြောင့်တည်းသွားလို့မရတာကြောင့် အချိုးအကွေ့နေရာတွေမှာ ခြေချော်မှောက်လျက်မလဲမိစေဖို့အတွက် အထက်ပါအချက်လေးတွေကို အကြုံပြုဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်။
အားလုံးပဲ မိမိလျှောက်လှမ်းရာ ဘဝမှတ်တိုင်တွေမှာ အောင်လံလွှင့်ထူနိုင်ကြပါစေ။